Tao anatin’ny telo volana monja… : mahatratra 213 ny isan’ny zaza very teto an-dRenivohitra | NewsMada
Tao anatin’ny telo volana monja… : mahatratra 213 ny isan’ny zaza very teto an-dRenivohitra
Nanomboka ny voalohan’ny taona 2021, tsy mitsaha-mitombo ny isan’ireo zaza very eto an-dRenivohitra. Tafakatra 213 sahady izany tao anatin’ny telo volana monja, raha ny nambaran’ny eo anivon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona etsy Tsaralalàna…
Ao anatin’izao krizy ara-pahasalamana izao, tsy mitsaha-mitombo ny isan’ ny ankizy very aharaisan’ny eo anivon’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona fitarainana, tato ho ato. Tao anatin’ny telo volana monja, nahatratra 213 sahady ireo zaza very ho an’ny teto Antananarivo Renivohitra. Maro ny olana miteraka ny fanjavonan’ireo ankizy ireo ka isan’izany ny ditra, ny olana any an-tsekoly. “Ireo zazavavy manodidina ny 15 ka hatramin’ny 17 taona eo ny tena anisan’ny hifampitadiavan’ny ray aman-dreniny matetika noho ny fanarahan’izy ireo lehilahy”, hoy ny Kaomisera lehiben’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona etsy Tsaralalàna, Andriamiandra Fidy. Tamin’ireo zaza 213 tsy hita, nitotaly 150 ny ankizivavy tsy ampy taona nokarohina. Efa tafaverina eny anivon’ny tokantranony avokoa ny ankamaroan’izy ireo, raha ny fanazavan’ny polisy hatrany. Etsy ankilany, saika nitondra vohoka mialoha ny fotoana ny sasany tamin’ireo tovovavy hita ireo, volana vitsy taorian’ny niverenany ao amin’ny ray aman-dreniny na ny mpitaiza azy. Marihina fa tokony ho salanisa eo amin’ny fisasahan’ny taona eo io 213, saingy izao tratra tao anatin’ny telo volana monja izao sahady noho ny fahasahiranana nianjady nateraky ny valanaretina coronavirus.
Olana any an-dakilasy…
Anisan’ny miteraka ny fitsoahan’ny ankizy ny trano fonenany mandritra ny fotoana maharitra koa ny olana misy ao an-dakilasy. “Matetika manana olana amin’ny mpiara-mianatra na ny fianarany ilay zaza ka manita-tsaina handositra”, hoy ny Kaomisera Andriamiandra Fidy. Tsy zakan’ilay zaza ny zava-misy iainany eo amin’ny samy mpinamana na koa eo amin’ny lafiny ara-pahaizana. “Mety tsy mahay io zaza io ka bedesin’ny mpampianatra matetika”, hoy hatrany izy. Mitaky fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny sy ny manodidina azy anefa izany amin’ny fanitsiana ny zaza mba tsy handosirany ny trano fonenany intsony. Etsy ankilany, maro ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina koa no hifampitadiavan’ny ray aman-dreniny sy ny polisy. “Tsy mahatadidy ny trano fonenany sy ny toerana halehany ilay zaza ka olona no manatitra azy eto aminay”, raha ny fanazavan’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona.
Ireo mpitaiza ny zaza no mangalatra azy…
Ankoatra izay, tranga isan’ny miseho matetika ihany koa, tato ho ato, ny fahaverezan-jaza misy mangalatra eny anivon’ny fiarahamonina. Ireo zazakely manodidina ny iray ka hatramin’ny dimy taona eo no tena iharan’io asa ratsy io. “Matetika ireo mpanampy ao trano no tompon’antoka amin’ny fangalarana ireo zaza ireo”, hoy ny Kaomisera Andriamiandra. Entin’izy ireo mitsoaka ny zaza ary ataony takalonaina izany, hoy hatrany izy. Etsy an-daniny, tsy mahalala na inona inona ireo zaza ireo ka manararaotra ireo mpangalatra. Raha tsiahivina, vao ny 25 marsa lasa teo no nahatrarana mpanampy iray sy mpivady mpiray tsikombakomba taminy nangalatra ny zanaky ny mpampiasa azy tany Manjakandriana ary nitaky vola nitentina 2 350 000 Ar tamin’ireto farany ireo olon-dratsy. Tafaverina soa aman-tsara eo amin’ny ray aman-dreniny ihany io zazakely io, telo andro taorian’ny nikarohana azy. Nidoboka etsy Antanimora kosa ireo roa vavy raha toa ka naiditra eny Tsiafahy ilay lehilahy. Fanampin’izay, tsy ireo nangalatra ihany no haiditra am-ponja fa misy amin’ireo zaza minia nandao ny trano fonenany noho ny fangalarana sy ny fandratrana olona tsy nahy koa voatery haiditra eny amin’ny fonja natokana ho azy ireo ary omena ny sazy sahaza azy avy.
Notontosan’i Tsiferana Randriatiana sy Fanou